Friday September 21, 2018 - 02:41:43 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Wuxuu yiri Prof. Gaas , "wiil ka yimid Xudur, Diinsoor, Buurhakaba oo qaba kabo dacas ah nagu ma xukumi karo dalkayaga", dad baanna u sacbiyay. Sida adiga oo Dhuusamareeb ka yimid aad u xukunto dhul aadan ku dhalan ayuu wiilkaas dacaska qab
Wuxuu yiri Prof. Gaas , "wiil ka yimid Xudur, Diinsoor, Buurhakaba oo qaba kabo dacas ah nagu ma xukumi karo dalkayaga", dad baanna u sacbiyay. Sida adiga oo Dhuusamareeb ka yimid aad u xukunto dhul aadan ku dhalan ayuu wiilkaas dacaska qaba, kuwa badan oo aan xitaa dacas heysan, kana imaann degmooyin, ee ka yimid tuulooyin ka sii yar ayaa xukumi doonna. Dhibka jira ayaa ah Soomaaliyada kuu sawiran iyo tiisa ayaa aad u kala duwan.
Waxaa ayaan daro in qof isku sheega masuul, aqoonyahanimo hadana ku hadaaqo hadalo deel qaaf iyo meel ka dhac ah iyadoo weliba uu isticmaalaayo ereyo bahdilaad ah hadii su,aal laga keenana meelo aan loo jooey kula aadi doona marwalba taariikhda waa mid ma dhamaato ah kuna keydsan yihiin waxii lasoo marey .
Maamulka Putland markuu yimaado xifaaltan siyaasadeed ee Soomaalida gudaheeda waxay sheegtaan iney Putland tahay Hooyadii Fedraaliska Soomaaliya .
Mar hadey sidaa tahay masuulkooduna uu noqdo qofaan ka xishoonin cunsuriyada iyo meelka dhaca joogtada ah sida hada inooga muuqata Madaxweynaha Maamul Gobaleed Putland C/weli Gaas qofka nuucaan ah oo looga fadhiyey inuu wada maareeyo bulshada qeybaheeda kala duwan maxaanu ku tilmaami karnaa waxaa jirta xigmad Soomaaliyeed ayaa oraneysa HADII DABKII DHAXMOODO MAXAA LAGU DIIRIYAA hadii horjoogigii sidaa ku hadaaqey maxaa moodaa taageerayiisha waa ayaan daro weyn .
Bulsha weynta kasoo jeeda deegaanada KGS waa kuwo ku dhiban meelo kala duwan mar hadii sidaa ay tahay maxaa idinla gudboon , aan isku dayo jawaabta idinku quman oo ku aadan dulmiga qaawan aan geed loogu soo gaban oo ay ku hadaqaan dadka aad la nooshihiin inaad u hiilisaan Maamulka aad kasoo jeedaan kuna boorisaan iney wax ka qabtaan amniga iyo cadaalada waxaan oran lahaaa tashada ma teeco ee ogaada inuu degaankiina aad wax ku tihiin hadii saas ay noqon waxaa u tagey tashan weydiyee waa laguu talin ama daranyo lakala qeybsado jiritaankooda .
Maamulka KGS waa inuu jawaab deg deg ah ka bixiyaa hadala meel ka dhaca oo kasoo yeerey Horjooga Maamulka Putland oo ka xishoon waayey inuu si bahdilnimo ah uga hadley bulsho ganacsi u joog ah ee ku sugan halka uu ka sheegey warkaasi ee Gobalada Bari ee Sooomaaliya.
Masuuliyiinya ahana musharixiinta waa iney ka dhiidhiyaan hadalada qadafka oo lagu weeraryo dadyowga aad masuulka ka tihiin waxaan rajeynayaa in looga jawaabi doono.waxaa hubaal in maanta ay wada daawadeena oo dhageysateen intiina badan oo ay dheregsan tihiin dhacdadaasi ee cidna ma maaqo qalinkeena waxaan ka hadalnaabi waa xaqiiq jirta oo dhab ah.
Okash Sugiow Mohamed sugoow55@hotmail.com